musha Oceania Ashleigh Barty Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Biography yaAshleigh Barty inokuudza Chokwadi pamusoro peKudiki kwake Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri, Vabereki, Mukomana, Murume kuti ave, Lifestyle, Net Kukosha, uye Hupenyu hwePamoyo.
Muchidimbu, tinoratidzira nhoroondo yemutambi wetenisi weAustralia uye aimbove cricketer. ChildhoodBiography inotanga kubva pamazuva ake ekutanga, kusvika paakatanga kuve nemukurumbira.
Ehe, munhu wese anoziva kuti ane mukurumbira nekuda kwemitambo yakasiyana-siyana uye nzira yekurudyi yekukanda kumashure.
Ash sekuzivikanwa kwazvo, mutambi tennis wekuAustralia akave mukadzi wekutanga wekuAustralia mumakore makumi mana nematanhatu (46) kuhwina French Open. Iva nekufemerwa paunotevera nhoroondo yeupenyu hwaAsh.
Ashleigh Barty Wechidiki Nyaya:
Ash akazvarwa musi we 24th waApril 1996 kuna baba vake, Robert Barty, uye amai, Josie Barty muguta rekuvaka reIpswich, iri munzvimbo iri kukura yeSouth East Queensland mudunhu reAustralia. Barty aingova nemakore mana (4) emakore paakatanga, achitamba tenesi.
Kunze kwetenisi, iye seMwana akatamba netball pamwe nevakuru vake vaviri (2) hanzvadzi. Nekudaro, Ashleigh akafunga kutarisa tenesi nekuti aifunga netball semutambo wevasikana.
Achicherekedza tarenda raAsh makore mana kana mana (4), airova bhora retenisi kubva kumadziro egaraji nemutambo wekare wemapuranga kwemaawa.
Vabereki vaAshleigh Barty vakabva vamutora kuenda naye kuWest Brisbane Tennis Center uko Jim Joyce aizove murairidzi wake.
Kunze kwekusazivikanwa kune rake rakanakisa ruoko-ziso kubatana uye yakakwirira danho rekutarisa. Ashleigh Barty akasara, akazvininipisa uye akatsunga. Hanzvadzi dzake dzinosimbisawo rupo rwake uye hunokwikwidza hunhu kubva paudiki.
Ashleigh Barty Mhuri Yemhuri
Kuda zvemitambo kwakakosha kumhuri yaAsh pamwe nevagari vazhinji mumusha weIpswich unozivikanwa seSpanish.
Imhuri yevaKristu vepakati nepakati uye yeAustralia imba naAshleigh vari vekupedzisira pakati pehanzvadzi dzake mbiri; Sara naAli zvakateerana.
Ashleigh Barty Mhuri Kubva:
Kunyangwe paine chokwadi chekuti Amai vaAshleigh Barty muChirungu Vanopinda, Ash ane ropa revaaborigine.
Iye anobva kuna Ngarigo nharaunda yevagari veAustralia; inowanikwa munzvimbo dzeMonaro neAustralia Alpine yeNew South Wales uye kuchamhembe-kumabvazuva kweVictoria.
Ngarigo yakakurumbira nemakomo ayo echando.
Zvakakodzera kucherechedzwa ndezvekuti Barty akatumidzwawo zita reNational Indigenous Tennis Mumiriri neTennis Australia uye sevamwe vanoshuvira kuparadzira rudo rwake rwetennis munharaunda dzese dzeAustralia.
Ashleigh Barty Dzidzo uye Basa Basa Rokuvaka:
Haven akararama hudiki hwake muSpanish, Ashleigh akapinda Woodcrest State College. Ashleigh aive nebasa rinonakidza rejunior achiri kuCollege, kuhwina zita re2011 reWimbledon revasikana uye nekusvika kusvika kuNhamba Yechipiri (2).
Kubva pane zvishoma zvatakurukura kusvika zvino nezva Ashleigh, unogona kuona kuti anofanira kunge akatanga basa rake achiri mudiki zvisingaite.
Pakazosvika Ash aine mapfumbamwe (9), aizodzidzira achipesana nevakomana vane makore gumi nemashanu uye gare gare nevanhu vakuru vachiri kuyaruka.
Ashleigh Barty Biography - Mugwagwa unoenda Mukurumbira:
Muna Kubvumbi 2010, achangosvitsa makore gumi nemana (14), Barty akatanga basa rake reunyanzvi paInternational Tennis Federation (ITF) muguta rekumusha kwake. Kunyangwe akakundwa mumutambo wake wekutanga, akanwisa wechipiri uye akazokunda mumutambo wake wekutanga wepro.
Kunyangwe ari mutambi mudiki mumakwikwi akati wandei, anogara achibuda muhwina. 2012 akamuona achihwina mazita mana eITF mune ese ari maviri singles uye akapetwa kaviri pakati pemamwe mahwina.
Ashleigh Barty Biography - Simuka Mukurumbira:
Kuchekerera uye kurongedza nzira yake kune mukurumbira, Ash Barty muna2013 akatanga kutamba achitamba zvakanyanya paWTA Tour nhanho.
Akakunda yavo miviri yekutanga yeWTA Yekushanya-nhanho mitambo paMalasian Open Open mushure meakanyanya dhizaini pa2013 Australia Open.
Vamwe vanosanganisira veFrance neUS Open uko kwaakakunda mitambo yake yekutanga-kutenderera kune vese gore rimwe chete.
Parizvino, Barty akahwina misoro misere sere (gumi nemasere) uye gumi gumi dzakapetwa pane iyo WTA Tour, kusanganisira imwe chete Grand slam singles zita ku 8 French Open uye imwe nemumwe wake. CoCo Vandeweghe.
Ash ndiye zvakare Iyezvino Chikwata mumasaiti kumafainari eWTA uye kubvira ipapo akasimbisa chinzvimbo chake seMambokadzi wepasirese wepasi rose nekupinda mukutora nzvimbo yeNhamba Yekutanga (1) paWTA Singles Chinzvimbo kubva muna 16 Kurume 2020.
Ashleigh Barty Upenyu hupenyu (Mukomana / murume / murume):
Tichitarisa zvinoshamisa zvekutanga basa rekutanga kwaAshleigh Barty, aiita kunge arasikirwa nehupenyu hwake hwemagariro.
Zvisinei, akawana rudo sezvo rwiyo runoenda kunzvimbo isina vanhu. Ash haasati aroora, asi anga achifambidzana negorofu wekuAustralia, Gary Kissick, kubvira 2017.
Gary zvakare inyanzvi yePGA paBrookwater Golf uye Nyika Club muBrisbane. Kunyangwe vaviri vakaroora vari muchato, hazvisati zvichizivikanwa nekuti isu hatisi kuona mhete pamunwe wake.
Ashleigh Barty Hupenyu Hwemhuri:
Nepo vaBartys vachisiya iyo Tennis maficha ezvinhu kune varairidzi vaAsh, ivo vachanyatso tarisa hutano hwavo, vachiratidza kuchenjera kwekuda kuneta.
Ashleigh airatidzika kunge mudiki kwazvo kuti ashandise rinenge gore rese kungave kudzidziswa kana kuve munzira.
Zvimwe Pamusoro paBaba vaAshleigh Barty:
Kamwe muna 2017, baba vaAshley, Robert Barty, vaiti 'Takamuona kwemazuva 27 gore rino, uye ane makore 17.' Akave nehanya zvakanyanya uye akapa Ash rutsigiro rwake ruzere.
Kuva mushandi wehurumende kunofanirwa kuve kwakamubatsira mukuita mabasa ake emari zvese saBaba neMurume.
Akacherekedza akaona kudzidziswa kwaAshleigh tenesi kubva paUdiki kusvikira ave nemukurumbira. Mazhinji mukombe weAsh unochengeterwa muhofisi yaRobert.
Zvimwe Pamusoro paAmai vaAshleigh Barty:
Mufaro waamai vese ndewekuona mwana wavo achizadzisa magumo mumhando huru. Zvino ndiwo waizova mufaro waJosie Barty, vanova Amai vaAsh.
A Radiographer nebasa uyo anofanira kunge akabatsira zvakanyanya mukudzidzisa chirango uye rudo rwemhuri sechinhu chekutanga muAshley.
Zvimwe Zvakawanda Nezvevana vaAshleigh Barty:
Kunyangwe hanzvadzi dzake mbiri Sara Coppolecchia naAli Egstorfs vaifanira kusiya zviroto zvavo zvemitambo sezvo mhuri yanga isingakwanise kuti vese vatambe, vanodada nehanzvadzi yavo uye vanogara vachitarisira kumuona adzoka kumba.
Sara, uyo ava Nyamukuta, naAli vakaroora vachifarawo.
Zvimwe Zvakawanda Ashleigh Barty Vemhuri:
Hapana ruzivo rwakawanda rwuripo maererano naAshleigh maChirungu Vanasekuru naAmainini avo vaanoshanyira gore rega padhuze neNottingham muUnited Kingdom. Nekudaro, isu takaona yakawanda yeAshi pamwe neMunin'ina wake uye Niece.
Ashleigh anodada anofamba uye anongoshandisa kwete mari chete asi yakawanda yenguva yake yekuzorora zvakare nemuzukuru wake nemuzukuru wake. Lucy dangwe ravo angangoita makore mana (4) okuberekwa, Oscar anenge ane makore matatu (3) ukuwo Olivia wacho ari mucheche achiri mucheche asina kana gore.
Ashleigh Barty Hupenyu hweMunhu:
Ngatitorei nekukurumidza kutarisa purogiramu yaAsh padivi pebasa rake; uye tinosvika pakuona kuti uyu Tennis prodigy anoda kuverenga, kubata hove, kutora Pizza, Fries, uye Ice Cream futi. Iwo mafirimu haana kusiiwa kunze newaanofarira Actor se Chris Hemsworth.
Iyo North Stradbroke Island inoita kunge inzvimbo yake yaanofarira yezororo inozivikanwa nekusevha, kudhiraivha, kayaking, kusimuka-paddleboarding, kuchovha, shiri, uye kunyange whale kutarisa zvakare. Zvinokuvhundutsa iwe kuziva kuti naiyewo anotya zvakakwirira.
Ashleigh Barty Mararamiro:
Sezvinozivikanwa zvakanyanya, Ashleigh anotambira kubva kune yake nyanzvi yetennis basa. Iye akahwina mubayiro wemari kumadhora gumi nemamirioni emadhora kubvira paakakatanga pro achitamba tennis muna 17 kusvika parizvino nereti razvino uno rinosvika mamirioni gumi emadhora emadhora.
Kunyangwe iye achibvuma kusararama hupenyu hwakawandisa, Iye anogara mune imba yakasarudzika iri munyika yake kumusha; Ipswich padyo nemhuri yake uye anoratidza rudo rwake kumotokari dzeJaguar.
Ashleigh Barty Chokwadi:
CHOKWADI # - 1 Yaimbova Cricketer
Muna 2014, akatora zororo kubva tennis, uye Ashleigh Barty akachinja kukiriketi uye akaridzira timu yenyika yeAustralia. Akaita zvekudzoka tennis muna 2016, achipinda mumakumi maviri ezvikamu muna 20.
CHOKWADI # - 2 Inotanga zuva nekofi!
Kurova zuva rake, Ashleigh anotendeukira kune kofi, mune chero chimiro kana fomu ingave espresso, cappuccino kana latte. Iyi yemazuva ese caffeine inogadzirisa inogona kuve chakavanzika pakubudirira kwake padare!
Chokwadi # - 3 Mwoyo Yevanhu
Barty, akauya nechirongwa chekuti nyeredzi dzeAustralia dziratidze rutsigiro rwevashandi vehutano muQueensland nguva pfupi yadarika panguva yeCOVID-19 denda. Izvi parutivi zvinobva pamadhora mazana matatu emamiriyoni emipiro kumhuri dzakakanganiswa nemisango muAustralia pakati pevamwe.
Iye zvakare ane moyo wemhuka futi. "Imbwa mhuka yangu yandinodisisa uye izvozvi ndine ina," anodaro; Rudy, Maxi, Affie, uye Chino, musanganiswa wefluff bhora mhando.
Zita rizere Ashleigh Barty
Zita reNick dota
Zuva rekuzvarwa 24th April 1996
Nzvimbo yekuzvarirwa Ipswich, Queensland, Australia
Baba Robert Barty
Vanun'una Sara Coppolecchia naAli Egstorfs
Hama Oscar (Muzukuru), Lucy naOlivia (Vabatsiri)
mudiwa Gary Kissick
zvinhu Kuverenga, Kubata hove uye Kuvhima
Zvemagariro Midhiya Instagram uye Twitter
Kutenderedza Ashleigh Barty's Biography uye Yehucheche Nyaya, tinosvika pakuona iyo hombe mhedzisiro yekuziva kurota kweumwe nekukurumidza zvakakwana. Zvakare kutevera kuburikidza nekushanda nesimba uye kutsunga kusvika pakufamba. Imwe Tennis prodigy yekutarisa ndeye Sophia Kenin.
Isu tinofungidzira kuti iwe wawana iyi Bio nyora-up moyo-kudziya uye kujekesa futi. Ita zvakanaka ku govana chiitiko chako nesu. Isu kuvimbisa iwe hwakawanda hwenyaya dzechokwadi neiyo yepamusoro-notch kunyatso uye kurongeka; mvura, huya upenye.